पेलेरै अघि बढ्ने देउवाकाे दाउ
काठमाडाैं, माघ ७। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पार्टीभित्रका असन्तुष्ट पक्षलाई पेलेर अघि बढ्ने भएका छन् । प्रधानमन्त्री समेत रहेका सभापति देउवाले शुक्रबार सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकमा पार्टीका विभिन्न गुट र उपगुटले उठाएका मागलाई बेवास्ता गर्दै अघि बढ्ने संकेत गरेका हुन् ।
वाम एकता बैंक मर्जरजस्तो: डा. बाबुराम भट्टराई
काठमाडौं, माघ ७ । संयोगै भन्नुपर्छ, चुनावी जितलाई पार्टी एकतामा अनुवाद गर्न कस्सिएका दुई ठूला वाम पार्टीले एकीकृत हुने दलको वैचारिक कार्यदिशामा सहमति जुटाएकै दिन नयाँ शक्ति पार्टी संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले त्यसलाई भनिदिए- बैंक मर्जरजस्तो ।
बाटो एउटै दुई पार्टी किन चाहियाेः प्रचण्ड
काठमाडौं, माघ ७ । पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपाली राजनीतिक इतिहासमा एमाले र माओवादी एक-अर्काका पुरकको रहेको बताएका छन् ।
यसरी मधेसी रिझाउँदै कांग्रेस
काठमाडौं, माघ ७ । राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा कांग्रेस, संघीय समाजवादी फोरम र राजपाबीच तालमेल हुने भएको छ । उम्मेदवारी मनोनयनअघि नै तालमेलको टुंगो लगाउने गरी तीनै दल शनिबारबाटै गृहकार्यमा जुटेका छन् ।
रातभर अनिँदो बस्छन्
प्रचण्ड र ओलीबीच बालकोटमा भेटवार्ता जारी
काठमाडौं, माघ ६ । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच बालकोेटमा भेटवार्ता भइरहेको छ ।
शनिबार अपरान्हदेखि दुवैबीच पार्टी एकताबारे छलफल चलिरहेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा नेपाल लन्डनमा
गभर्नर डा नेपालसंगै उनकी पत्नी सुमन नेपाल, उध्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष तथा लोबल आइएमई बैंकका सीइओ चन्द्र ढकाल र पौडेल जनक शर्मा पौडेल शनिबार बिहान लण्डन उत्रिए ।
इस्तानबुल, माघ ६ । टर्कीमा भएको एउटा बस दुर्घटनामा परी एघारको मृत्यु भएको छ ।
रहस्यमयी बन्दै ब्राजिलको मृत्यु, यस्तो छ दिदिको वयान
सिड्नी । अघिल्लो शुक्रबार सिड्नी न्युटाउनस्थित आफ्नै डेरामा मृत भेटिएका ब्राजिल गुरुङको मृत्युको कारण थप रहस्यमयी बन्दै गएको छ ।
Page3of 3179